Khuphela iividiyo ze-Instagram ➵ Khuphela iividiyo ze-Instagram, iiVidiyo eziVuselayo, iiFoto, amaBali kunye neeVidiyo ze-IGTV kwiakhawunti yakho ye-Instagram okanye nakweyiphi na yoluntu.
Khuphela iividiyo ze-Instagram
❝Ifoto ye-Instagram, ividiyo, kunye nokukhuphela i-IGTV.❞
➶ Khuphela iividiyo ze-Instagram, iiVidiyo eziVuselayo, iiFoto, amaBali kunye neeVidiyo ze-IGTV kwiakhawunti yakho ye-Instagram okanye nakweyiphi na yoluntu.
Iwebhusayithi ikakhulu yokukhuphela iividiyo ze-MP4 kwi-Instagram kwi-intanethi usebenzisa i-Instagram Video Downloader. Gcina i-IGTV, khuphela iiprofayili ze-IG kunye neevidiyo ekubetheni kwentliziyo. Umgangatho wokuqala, akukho lubhaliso- zama ngoku.
Umkhupheli we-Instagram uChannel / Firefox
I-Instagram Downloader ikuvumela ukuba ukhuphele iividiyo okanye ugcine iifoto ukusuka kwi-Instagram ngqo kwi-PC yakho, ithebhulethi okanye ifowuni ye-Android. ➥ Faka ngoku
Ungazikhuphela njani iividiyo kwi-Instagram
Landela la manyathelo mathathu alula kunye nokukhuphela ukonwaba!
Emva kokungena kwiakhawunti yakho ye-Instagram, cofa ii-ellipses kwikona ephezulu ngasekunene kwevidiyo ofuna ukuyikhuphela kwaye ukhethe ikhonkco lokukopa.
Emva kokuba i-url yeposi ikhutshiwe, cofa ekunene kwimouse yakho ukuze uncamathisele i-url apha kule bhokisi yokubhaliweyo ingasentla kwaye ucofe u-Enter isitshixo.
Isikhupheli sevidiyo sethu se-Instagram siyakukhupha amakhonkco aphakamileyo evidiyo, kwaye unokukhetha ukukhuphela nawuphi na umgangatho owufunayo.
Uyikhuphela njani iividiyo ze-Instagram ngolwandiso lweChannel kunye nokongezwa kweFirefox
🧐 Yonke imihla, izigidi zeefoto zithunyelwa kwi-Instagram. Oku kuyenza ukuba ibe yeyona app ifunwayo emhlabeni. Uhlala ufumana imifanekiso ekufuneka uyigcinile. Ewe unako ukugcina iifoto kwi-app kunye nenketho yokuthatha izikrini ngefowuni. Kodwa, ekugqibeleni unokufuna ukugcina umfanekiso kwi-smartphone yakho okanye kwikhompyuter kwisisombululo esiphakamileyo. Zama amanyathelo akhawulezayo okukhuphela iifoto ze-Instagram, iividiyo kunye namabali akumgangatho we-HD.
Dlala ividiyo kwi-Instagram.
Vula ukhuphelo lwevidiyo ye-Instagram Chrome / Firefox ➥ Faka ngoku
Emva kokuba uvule esi sixhobo, iqhekeza lekhowudi liya kwenziwa kwithebhu yangoku. Le khowudi inoxanduva lokuhlalutya ikhowudi ye-json kwaye ufumane i-id yeposti ebonisa ngoku kwiscreen. Izithuba ezingabonakali kwisakhelo sesikrini azihoywa.
Emva kokufumana i-id yeposi, isixhobo siyaqhubeka nokuthumela isicelo kwi-Instagram ukufumana idatha kaJson. Iqhosha lokukhuphela liza kubonakala ngezantsi kweposti nganye nangaphakathi kwezixhobo zefestile.
Unokujonga kwaye wandise ii-avatars ngomgangatho ophezulu. Khuphela ngokulula i-ID yesithuba kunye ne-hashtag kwizithuba.
Qaphela: Esi sixhobo sixhasa kuphela ukukhuphela iifayile ezisingathwe yi-Instagram. Olu lwandiso aluniki ukufikelela kwiwebhusayithi nganye, ke abasebenzisi abanakho ukukhuphela iividiyo kwizithuba ezifakwe kwezinye iiwebhusayithi.
Izibonelelo zokusebenzisa i-Instagram Story Saver
Amabali e-backup kwaye uwalayishe ngokukhawuleza kamva.
Gcina kwaye uphinde uthumele ividiyo ye-Instagram ukonyusa ibali lakho le-Instagram lokuzibandakanya, ukuthanda, kunye nabalandeli.
Gcina iividiyo ze-Instagram ukuze ubukele kamva.
☀ Khuphela i-HD epheleleyo ye-1080p, HD 720p ividiyo evela kwi-Instagram.
☀ Guqula ividiyo ye-Instagram iye kwi-mp4.
☀ Isikhupheli somculo se-Instagram.
☀ Khuphela umculo kwiividiyo ze-Instagram.
☀ Khuphela i-Instagram carousel.
☀ Khuphela umboniso wesilayidi kwi-Instagram.
☀ Khuphela amabali e-Instagram.
☀ Gcina izinto eziphambili ze-Instagram.
☀ Khuphela iividiyo ze-IGTV.
☀ I-Instagram eyimfihlo yokukhuphela ividiyo.
☀ Umbonisi womfanekiso we-Instagram.
☀ Isikhupheli somfanekiso we-Instagram.
☀ Khuphela imifanekiso yoqobo kwi-Instagram.
☀ Khuphela i-Instagram thumbnails.
☀ Khuphela i-Instagram caption.
☀ Khuphela i-gif kwi-Instagram.
☀ Khuphela iifoto ezininzi ze-Instagram.
☀ I-Instagram ephilayo yokukhuphela ividiyo.
☀ Khuphela ividiyo kumyalezo we-Instagram.
☀ Ngenisa umfanekiso kwiprofayile yakho ye-instagram nakweliphi na iphepha lewebhu.
☀ Umyalezo ngqo kwiwebhu.
☀ Umyalezo wokukhuphela umyalezo we-Instagram.
☀ Khuphela zonke iifoto ze-Instagram kwi-zip.
Ngaphezulu kwenethiwekhi nje, i-Instagram yindlela elula, eyonwabisayo kunye noyilo lokufaka, ukuhlela, kunye nokwabelana ngeefoto, iividiyo kunye nemiyalezo nabahlobo kunye nosapho. Ukongeza ekuvumeleni ukwenziwa kweefoto kunye nevidiyo, i-Instagram isungule enye yezona zinto zisetyenziswa kakhulu kwisicelo, indibaniselwano yamabali e-Instagram yemifanekiso okanye ividiyo kwaye emva kokuba ithunyelwe iyafumaneka nge-24h. Emva kweli xesha, akusekho kunokwenzeka ukuyibona.
Isikhupheli sevidiyo se-Instagram
Ukhuphelo lwevidiyo ye-Instagram yinkqubo yewebhu ekwi-intanethi yokukhuphela iividiyo ze-Instagram kunye neefoto kwikhompyuter yakho okanye kwifowuni ephathekayo ngokuthe ngqo.
Isikhupheli somfanekiso se-Instagram
I-Downloader yakho ekulula ukuyisebenzisa kwi-Instagram. Gcina iifoto kunye neevidiyo kumgangatho wokuqala.
Khuphela iividiyo zabucala ze-Instagram
Khuphela nayiphi na ifoto okanye ividiyo kwiakhawunti yabucala ye-Instagram oyilandelayo.
Zonke iividiyo zikhutshwe ngqo kwiiseva ze-Instagram CDN, ezenza ukuba esi sixhobo sikhuseleke ngokupheleleyo.
I-Instagram Video Downloader isebenza kakuhle kwiGoogle Chrome, Firefox, Opera, Microsoft Edge kunye naziphi na izikhangeli zewebhu.
Isikhupheli sephrofayili se-Instagram
Yindlela elula yokukhuphela iividiyo ze-Instagram kunye neefoto ngegama lomsebenzisi le-Instagram.
Isikhupheli sebali le-Instagram
Usebenzisa isixhobo sokuKhuphela i-IG Stories, ungagcina iividiyo kunye neefoto zamabali kwimizuzwana embalwa.
Isikhupheli se-Instagram IGTV
Gcina i-IGTV kwifowuni yakho okanye kwi-PC-gcina iitutorials eziluncedo, imisinga ephilayo, kunye neevidiyo ezihlekisayo ngaphandle kwentlawulo.
Umbukeli webali le-Instagram
Uyakwazi ukujonga onke amabali asebenzayo kunye neeMbalasane zayo nayiphi na iakhawunti kawonkewonke ye-Instagram.
Khuphela amanqaku aphezulu e-Instagram
Ngesi sixhobo unokukhuphela iividiyo ze-IGTV, amabali e-Instagram kunye nezinto eziphambili
I-Instagram reels yokukhuphela
Khuphela iividiyo zeReel Reels kwifomathi enesisombululo esiphakamileyo kunye nomculo ongasemva.
Umkhupheli wealbham ye-Instagram
Khuphela zonke iifoto ze-Instagram kunye neevidiyo kuwo nawuphi na umsebenzisi we-Instagram.
Umbonisi weprofayile ye-Instagram
Jonga umfanekiso weprofayile ye-Instagram yakhe ngobukhulu obupheleleyo.
Umfumani we-ID yomsebenzisi we-Instagram
Fumana okanye ufumane i-id yomsebenzisi we-Instagram evela kwigama lomsebenzisi.
Fumana imibuzo kunye neempendulo apha -Uyigcina njani iividiyo ze-Instagram?
+ Yintoni uKhuphelo lweVidiyo ye-Instagram?
Umkhupheli weVidiyo ye-Instagram yinkonzo ekwi-Intanethi ekuvumela ukuba ugcine umxholo wevidiyo kwiPC yakho okanye kwifowuni ephathekayo. Esi sixhobo yeyona ndlela ilula yokukhuphela iividiyo ozithandayo kwaye awunakuphila ngaphandle kwesixhobo sakho.
+ Yintoni uKhuphelo lwePost Instagram?
I-Instagram Post Downloader yinkonzo egcina nayiphi na imifanekiso ye-Instagram nakwesiphi na isixhobo.
+ Ngaba i-Instagram downloader igcina iividiyo ezikhutshelweyo okanye igcina ikopi yeevidiyo?
Asizigcini iividiyo. Kananjalo asigcini iikopi zevidiyo ezikhutshelweyo. Zonke iividiyo zibanjiwe kwiiseva ze-Instagram. Kwakhona, asigcini umkhondo wembali yokukhuphela yabasebenzisi bethu.
+ Ndizikhuphela njani iividiyo zabucala kwi-Instagram?
Kukho iindlela ezahlukeneyo zokukhuphela iividiyo ze-Instagram kwiakhawunti yabucala. Phakathi kwabo, enye indlela kukwazi i-URL yeakhawunti yabucala ye-Instagram ngokwenza iakhawunti ye-Instagram kwaye ulandele umntu ofuna ukumazi nge-URL yezithuba zabo. Emva kokuba wamkelwe emntwini kwaye ukuba umntu uqinisekisa isicelo sakho sobuhlobo, uya kuba nakho ukubona zonke iividiyo zabo zabucala. Ukukhuphela iividiyo kufuneka ufake ii-extensions zeChannel okanye iFirefox. ➥ Faka ngoku
+ Kutheni ufuna uMkhupheli weZithombe ze-Instagram?
Okokuqala, kugcina ixesha. Akunyanzelekanga ukuba uthathe izikrini, uzihlele, kwaye ube nomsindo kwimifanekiso ekumgangatho ombi. Okwesibini, ufumana iifoto ngaphandle kwelahleko esemgangathweni.
+ Yeyiphi ifomathi yevidiyo ye-Instagram ekhutshelweyo?
Kuxhomekeke kumgangatho okhoyo wevidiyo ye-Instagram, ividiyo yethu yokukhuphela ividiyo ye-Instagram ikhupha i-1080p, umgangatho we-HD kunye nekhonkco levidiyo esemgangathweni ye-SD. Unokukhetha ukukhuphela nayiphi na into oyifunayo. Nangona kunjalo, kwezinye iimeko, umgangatho wevidiyo uphantsi kwaye ividiyo efumanekayo kuphela ikumgangatho we-SD.
+ Yintoni uKhuphelo lwebali le-IG?
Umkhupheli wamabali e-Instagram yinkonzo eyilelwe ukugcina amabali e-IG, ukubukela ngaphandle kweintanethi, kunye nokuzisebenzisa kwakhona.
+ Ungazikhuphela njani iividiyo ze-Instagram kwifowuni yam ye-Android?
Isikhupheli sevidiyo se-Instagram sele sifumaneka kwiFirefox ngeefowuni ze-Android. ➥ Faka ngoku
+ Yintoni uKhuphelo lwe-Instagram IGTV?
Isikhupheli se-Instagram IGTV yindlela eqinisekisiweyo yokugcina iividiyo ezikumgangatho ophezulu kwi-Instagram TV.
I-Instagram ineentlobo ezimbini zeakhawunti: zikaRhulumente nezabucala. Iiakhawunti zikawonkewonke zezo zinokuthi nabani na ajonge izithuba zabo. Iiakhawunti zabucala zahluke kancinci kuba zinokujonga kuphela iiposti ezivela kubo abazilandelayo. Kwimeko enjalo, i-Instagram downloader inokukhuphela nayiphi na ifoto kunye nayiphi na ividiyo kubo bonke abasebenzisi bakarhulumente. Kubasebenzisi babucala, udinga imvume yabo yokujonga imifanekiso, ngaphandle kokuba uvunyelwe, kunzima ukukhuphela ifoto ye-Instagram.
+ Zingaphi iividiyo endinokuzikhuphela kwi-Instagram?
Ukukhuphela ividiyo kwi-Instagram akunamida, ngeyure, ngemini okanye abanye. Unokuzikhuphelela kwi-Instagram ezininzi iividiyo kunye nemifanekiso njengoko ufuna.
+ Yintoni i-Instagram Reels?
I-Instagram Reels luphawu olufutshane lokwabelana ngevidiyo kwi-Instagram. Abasebenzisi banokwabelana ngevidiyo emfutshane (ukuya kuthi ga kwimizuzwana eli-15 ubude), ke yindlela yayo yeTikTok.
+ Ngaba ndingazikhuphela iividiyo ukuba andinguye umsebenzisi obhalisiweyo we-Instagram?
Hayi udinga ubhaliso lwe-Instagram ukuze ukwazi ukungena kunye nokubukela iividiyo.
+ Ndingazigcina iividiyo ezibukhoma ze-Instagram?
Awungekhe ugcine iividiyo ezibukhoma ze-Instagram ngelixa usasaza kodwa ungazikhuphela emva kokuba begqibile ukusasaza.
+ Ungazikhuphela njani izithuba ze-Instagram carousel?
Khuphela kwaye ugcine iifoto kunye neevidiyo ezininzi kwi-Instagram kulandela la manyathelo ambalwa ... Vula iposti ye-carousel enemifanekiso kunye nevidiyo ofuna ukuzikhuphela. Emva koko, vula olu lwandiso. Ngokukhawuleza uya kufumana ikhonkco lokukhuphela. ➥ Faka ngoku
+ Ithini i-ID yomsebenzisi we-Instagram?
Ngaphezulu kwesigidi sezigidi zabantu abasebenzisa i-Instagram kwihlabathi liphela kwaye inani liyanda ngesantya esikhawulezayo. Nangona kunjalo, iakhawunti nganye ye-Instagram ine-ID yayo eyahlukileyo ekwabizwa ngokuba yi-ID yomsebenzisi emele iakhawunti ethile. Isazisi somsebenzisi sahlukile kwigama lomsebenzisi kwi-Instagram ngendlela igama lomsebenzisi elinokutshintsha kodwa awukwazi ukutshintsha i-ID yomsebenzisi yeakhawunti, ihlala injalo ngonaphakade.
+ Yintoni injongo yokufumana i-ID yomsebenzisi we-Instagram?
Ezinye iinkonzo zomntu wesithathu kunye neenkonzo zikucela ukuba ufake i-ID yomsebenzisi yeakhawunti. Kananjalo ngokwazi i-ID yomsebenzisi yeakhawunti ungazi ngakumbi ngayo.
+ Uyifumana njani i-ID yomsebenzisi we-Instagram?
Kulula kakhulu ukusebenzisa esi sixhobo ukufumana i-ID yomsebenzisi we-Instagram kwaye akuthathi xesha ukwenza oko. Nangona kunjalo, kukho into efunekayo ethi, kufuneka ulazi igama lomsebenzisi leakhawunti ofuna ukufumana i-ID yomsebenzisi. Ngenisa igama lomsebenzisi lweakhawunti oyifunayo kwibhokisi yokufumana. Emva koko, cofa kwindawo ethi Fumana i-ID yomsebenzisi.
+ Yintoni i-Instagram Engagement Rate Calculator?
Inqanaba lokuzibandakanya lilinganiswa ngokobuninzi babalandeli bakho abanxibelelana okanye ababandakanyeka kwiphepha lakho. Naluphina uhlobo lomsebenzi wokunxibelelana kwiphepha lakho unokuqwalaselwa. Sithathela ingqalelo amagqabantshintshi, gcina, ukuthanda, okanye ukujonga njengezinto zokubandakanya i-Instagram yokubandakanya ukubala.
+ Ezona ndlela zingcono zokuKhuthaza ukuBandakanyeka kwakho kwi-Instagram
Yandisa abalandeli bakho bemveliso ngokuvelisa umxholo wokuqala. Sebenzisa iinkonzo zentengiso ukutsala abaphulaphuli abanomdla ofanayo kwiphepha lakho. Sebenzisa ii-hashtag ezichanekileyo ukuphakamisa ukubandakanyeka kwakho okuqinisekisiweyo. Rhoqo layisha izithuba ezitsha njengezithuba zangoku zihlala ziphezulu.
Khuphela iividiyo ze-Instagram kwi-HD epheleleyo
Ukukhuphela ividiyo kwi-Instagram kukunceda uvelise amakhonkco ngokuthe ngqo kwiividiyo zakho ozithandayo ze-Instagram kwaye uzigcine ukuze ujonge kunye nokwabelana ngaphandle kweintanethi.
Ividiyo ikhuphela kwangoko kwaye igcine kwifowuni yakho ngomgangatho ophezulu! Ndincome kakhulu le!
Yithande le app. Ngoku ndinokukhuphela iividiyo kwi-Instagram. Ilula kwaye kulula ukuyisebenzisa.
Ndingayigcina ividiyo kwigalari yam ukuze ndiyisebenzise kamva.
Isikhupheli esheshayo se-Instagram.
Yindlela ekhuselekileyo yokukhuphela ifoto ye-Instagram njengoko yonke idatha iyimfihlo kwaye ayinakuphazanyiswa ngokunika umntu isiqinisekiso semfihlo.
Ukukhuphela amabali e-Instagram ngokungaziwayo akuzange kube lula.
I-Instagram Video Downloader Bot-Esona sixhobo sasimahla kwi-Intanethi sokukhuphela kunye nokugcina iividiyo kunye neefoto ezivela kwi-Instagram 2021
Ikhowudi ye-QR findmyfbid downloadgram downloadvideosfrom